Hipetraka Hetra Taratasy fanamarinana Manamarina ny ao Korea - Fidiram-bola ny hetra manamarina ny - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Hipetraka Hetra Taratasy fanamarinana Manamarina ny ao Korea - Fidiram-bola ny hetra manamarina ny
Ny Hipetraka Taratasy na Fonenana Taratasy fanamarinana ny antontan-taratasy manaporofo ny olona iray dia kilonga mponina ny iray firenenaAo ny raharaha ny velona sy miasa ao Korea Atsimo, Hipetraka Taratasy fanamarinana atao afa-miala amin'izany ny olona tsy ho avo roa heny hetra raha ny fampianarana amin'ny sekolim-panjakana ao Korea. Ny olom-pirenena ao amin'ireto firenena ireto dia afaka tsy mandoa vola hetra ao Korea amin'ny alalan'ny fanomezana porofo ny Hipetraka Taratasy fanamarinana: Indrisy ny soa ihany no azo ampiharina ho an'ireo sekolim-panjakana ny mpampianatra ka noho izany dia ampiasain'ny governemanta. Ireo izay miasa ho an'ny tsy miankina ny andrim-panjakana ary aorian'ny-tsekoly ny fandaharana dia tsy afaka. Ny olona tsirairay izay hizaka ny Hipetraka Taratasy fanamarinana sy hanaiky ny sekoly dia ho afa-miala amin'ny fidiram-bola ny hetra ao Korea noho ny roa taona voalohany ao Korea ihany. Ireo izay niasa nandritra ny taona voalohany amin'ny hagwon na sekoly tsy miankina, ary avy eo hifindra any amin'ny sekolim-panjakana, dia tsy afaka milaza iray taona ny hetra manamarina amin'ny manan-kery Hipetraka Taratasy fanamarinana. Ireo izay nampianatra tao amin'ny ivon-toerana tsy miankina na tsy miankina ho an'ny sekoly ny roa taona na mihoatra ao Korea, ary avy eo nafindra tany amin'ny sekolim-bahoaka dia tsy ho afaka ny milaza na inona na inona vanim-potoana ny hetra manamarina. Ireo izay maniry ny hampiharana ny Fonenana Taratasy fanamarinana dia mila hifandray ny firenena ny mety mifehy ny hetra birao. Mba jereo ny lisitra manaraka ity mba hahitana fanazavana bebe kokoa momba ny toe-javatra manokana. Mba hahazoana ny hetra manamarina raha ao Korea Atsimo, ny mpampianatra dia mila mametraka ny Hipetraka Taratasy fanamarinana ny sekoly ara-pitantanana birao tany am-piandohana ny fifanekena (talohan'ny voalohany karama karama). Ny mpiasa miandraikitra ny hetra dia avy eo dia manaiky izany ny mety mifehy ny hetra birao. Ireo olona izay mikasa mba hijanona ao Korea mihoatra ny iray taona (ny mety hisian'ny nafindrany sekoly hafa taorian'ny taona voalohany), izany no soso-kevitra izay ampiharina ho an'ny roa hipetraka taratasy fanamarinana dika mitovy. Rehefa mandray ny hipetraka taratasy, koa dia nanoro hevitra ny hanao dika mitovy ny tany am-boalohany(s) ary hitandrina izany miaraka aminao ao amin'ny hetsika ny sekoly mety misplace ny taratasy fanamarinana rehefa manaiky. Tsy ny ANTSIKA hipetraka certifate asa nandritra ny roa taona na dia ny mponina maintsy mangataka sy manaiky ny hipetraka taratasy fanamarinana isaky ny roa taona. Na izany aza, koreana hetra birao dia afaka mangataka ny faharoa dika mitovy ho an'ny taona manaraka raha mahatsapa izy ireo dia ilaina. Moa aho mbola afaka miditra ho an'ny hetra tsy iharan'ny sata aho raha niasa tao Korea ny lasa ary aho hiverina hiasa ao Korea indray. Hi - no tena mila hetra firaketana avy amin ny firenena an-trano avy amin'ny taona teo aloha. Izaho no fiainana sy ny fandoavana ny hetra eo amin'ny firenena hafa ny roa taona. (Aho Amerikana) mila mampihatra hipetraka taratasy fanamarinana avy amin'ny firenena an-trano.
Ianao afaka mahazo maimaim-poana ny fidiram-bola ny hetra mandritra ny roa taona voalohany. Toy ny Amerikana, dia nametraka ho an'ny U S, mponina hetra manamarina ny nanome ANTSIKA ny olom-pirenena ao Korea Atsimo.
Io hetra manamarina tsara nandritra ny roa taona, ary midika hoe tsy aho hetra ny koreana fidiram-bola ny hetra avy amin'ny karama bebe. Mba hianatra ny fomba mba ho afaka, jereo ity lahatsoratra ity. Ho an'ny UK olom-pirenena, dia misy ara-bakiteny tsy misy teboka eo ny manao izany, satria izany dia midika fa ny olona iray dia tsy maintsy mandoa UK hetra fa tsy ny koreana hetra, ary UK hetra dia BE ambony.
Toy ny olona iray izay efa niasa ho an'ny EPIK teo aloha, ary dia nanomana ny hanao izany indray, mba hanaraka ny toro-hevitra sy fotsiny mandoa ny koreana hetra.
Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona ny roa taona ny hetra manamarina. Midika ve izany fa tapitra ny fahalavoana taona Dia nanaiky ny taratasy fanamarinana ny hipetraka ny sekoly talohan'ny voalohany ny vanim-potoana karama. Isika izao manakaiky ny faharoa dia ny vanim-potoana karama, ary nolazaina tamiko fa ny an-tsekoly ny fitantanana ny birao dia fantatro loatra ny zavatra tokony hatao amin'ny tahirin-kevitra. Misy hevitra eto raha toa ianao ka ho ANTSIKA olom-pirenena anao dia afa-miala amin'izany ny roa taona voalohany.
Fa ianao dia mila tanana amin'ny fepetra takina tahirin-kevitra.
Raha toa ianao efa tao Korea mihoatra noho ny roa taona, ianao dia tsy maintsy hametraka hetra.
Korea - seranam-piaramanidina famindrana